DIINA UUMMATAA WALIIN TA’ANII OLAANTUMMAA UUMMATAA MIRKANEESSUUN HIN DANDA’AMU! « QEERROO
DIINA UUMMATAA WALIIN TA’ANII OLAANTUMMAA UUMMATAA MIRKANEESSUUN HIN DANDA’AMU!
Abdii Bilisummaa Irraa
Kaleessa uummanni Oromoo jaarraa tokkoon dura abbaa biyyasaafi abbaa waansaa maraa ture. Biyyasaarratti abbaa biyyummaasaa kabajatee, aadaa, duudhaa, amantiifi eenyummaasaa qabatee wal waamee waliif awwaatee, dubbatee wal dhaga’ee waldhageessisee, rakkoorratti waliif birmatee, gadda irratti waliin hirmaatee, gammachuu waliin qooddatee garraamummaadhaan wal shakkii tokko malee ilma abaluu, warra gamaa warra gamanaa utuu waliin hin jedhiin baroota dheeraadhaaf waliin jiraachaa turuunsaa akka seenaatti yaadatama. Maaddii tokkoo waliin nyaatee, qodaa tokko keessaa unatee waliin dhugee akka seera mataasaatti safuufi aadaa mataasaatiin wal geggeessaa,wal bulchaa tureera. Ilmi oromtichaa intala oromtichaa gosa ilaallatee wal fuudhaa, wal kabajee waliin jiraachaa tureera. Tokkummaadhaan diina biyyaasaa saamuuf kallattii hedduun itti duulaa tures waliin itti duulee injifatee qe’eesaa eegee wal eegsisaa tureera. Ofiisaarra darbee ollaasaafi saboota biroof kabaja qabaachuurraa kan ka’e orma guddisee maqaas moggasaa ture. Hayyummaafi beekumsa mataasaatiinis sirna bulchiinsaa mataasaa qalaqatee, dhaha ykn kalaanderii mataasaa uummatee ittiin geggeeffamaa tureera.kanaanis qaroominni uummata oromoo adunyaa guutuu dinqisiisuurra darbee, kalaqniifi hayyummaan isaa addunyaa guutuutti gaaffii uumeera. Uummanni Oromoo hayyummaasaa kanaan addunyaadhaaf bu’uura qorannoofi kallattii kaa’ee darbuusaa seenaatu dubbata. Harra garuu inni jedhan hunduu hafee uummanni Oromoo sadarkaan addunyaa abjuu ta’ee, adda durummaa akka Afrikaatti qabaachuun hafee, biyya toophiyaa keessatti abba biyyaafi murteessaa ta’uun hafee, biyyasaa ganamaa ishee dhuunfaasaa kan taate Oromiyaa keeessatti utuu qabuu dhabee, utuu liqeessuu qabuu liqeeffatee, utuu ormatti hin dabiin itti dabamee, qabeenyasaa sadarkaa addunyaatti jijjiirama fiduu danda’u utuu qabuu ofii gad guddachaa, ofii hiyyumaan adabamaa orma duuromsaa, utuu qabuu harka ormaa ilaalaa, ofumaa kennee deebi’ee kadhachaa, maqaa xuraa’aa baatee maqaa gaarii orma badhaasaa jiraachuu erga jalqabee kunoo baroonni darbanii jaarraan tokko dhumee jaarra lammaffaan dabareesaa lakkaawwataa walakkaan ga’eera.
Harra Oromoon aadaa bareedaafi boonsaa eenyummaafi qabeenyummaasaa calaqqisiisu dhabee kan ormaa achii dhufteesaafi ba’aaf galmasaa hin beekne bakka buufatee utuu irraa hin bareediin waliin rakkataa jiraata. Utuu sirni garboomfataa gara isaatti hin seeniin Oromoon, aadaa nyaataa, adaa uffannaa, aadaa wal kabajuufi safuu, aadaa fuudhaafi eerumaa mataasaa kan eenyummaasaan wal fakkaatu niqaba ture. Kaleessa mootummaan abbaa irree humnaan dadhabee malaan cabsee uummata oromoo seene, harras utuu humnaan hin xiqqaatiin oromoon tooftaa diinni illmaan isaa wayyaaneen bifa haaraan bixxilattee gara barbaaaddetti oofaa jirtu jala ba’uu dadhabee garbummaa bara dheeraa kana dhalootaa dhalootatti dabarsaa jira. Kaleessa mootummaan garboomfataa tooftaa nama keenya namuma keenyaan bituutiin tokkummaa uummata keenyaa cabsee summii wal shakkuu kan keessa facaase, harras garboomfataan biraa tooftaa kana bifa anmayyaa’een hundeessee uummata keenya uummatuma keenyaan bituu itti fufeetuma jira. Kunis dhaaba maqaa uunmata oromoon dhaabbateen sossobee barra bittaasaa dheereffachuudha. OPDO.
Harras mootummaan garboomfataa wayyaanee maqaa dimokiraasii jedhu dawoo godhatee uummata keenya jaalalaan akka horiitti wal arraabaa waliin ture gidduu seenuudhaan uummata keenya diigee gargar facaasuun ejjennoosaa jalqabaati. Uummanni oromoo utuu hin jaallatiin gargar faffaca’ee amantii adda addaa hordofaa, aadaa kansaa gatee kan ormaa kabajaa, jaalala eenyummaasaa dhiisee illalcha hammaataa waliif qabaachaa dhufuudhaan tokkummaan isaa daran diigamaa dhufuudhaan akka jireenya hawaasummaallee waliin hinjiraanne ta’eera. Kana gochuu keessattis shirri mootummaan wayyaanee gochaa jirtu laayyoo miti. Uummanni amantii garaagaraa qabu waliif kabajee bakka waliin jiraatutti gidduu seenuudhaan gaafii masgiida musiliimotaatti, gaafiimmoo mana amantaa kiristaanotaatti meeshaa waraanaa darbachuudhaan, warra kiristaanaatu isin gube, warra musiliimaatu isin gube jechaa uummata kewnya wal shakkisiisaa turuufi harrallee itti jiraachuun niyaadatama. Kana malees, manneetii barnootaa olaanoo garagaraa keessatti barattoota walitti buusuudhaaf yaalii garagaraa gootee ittis milkaa’aa turteetti. Akkasumas uummata keenya kutaadhaan, lagaan qooduudhaan balaa gurguddaaf erga saaxiltee booda uummanni nagaan waliin jiraataa ture akka wal hin amanne gochuun gidduu galtee fayyadamummaashee milkeefataa turte; harras itti jirti. Mootummaaan wayyaanee uummata baroota hedduuf walkabajee daangaa walii eeggatee jiraataa ture gidduu seenuun walitti buuftee akka wal waraanan haalota mijeessitee nagaa uummataa jeeqaa turteetti; harras itti jirti. Kanaafis walitti bu’insa dhimma daangaa somaaleefi oromiyaa giddiitti ta’aa jiruun mootummaan wayyaanee gidduudhaan itti ho’isaa jiraachuunsaa ragaadha. Wayita uummanni shira ishee irratti baree waamee wal dhageessisee, iyyee waliif birmatee tokkummaadhaan dhaabii ishee dhorketti mootummaan wayyaanee shira haaraa uummachuudhaan garaagarummaa yaadaa nama keessatti uumtee bara bittaashee dheereffataa jirti. Kanaafis tooftaa OPDOn ittiin uummata burjaajjessaa jirtu kaasuun nidanda’ama. Uummanni tokkummaadhaan wal ijaaree diina miilla tokkoon dhaabe, harrammoo jechoota filatamoo laphee uummataa tuqan fayyadamuu OPDO dhaggeeffachuun yaada hiraa akka jiru argaa jirra. Sana dura dura garuu kaayyoo qabsoo uummata oromoo ganamaa ishee lubbuu kumaatamaan lakkaa’am galaafatte, lafee gootota kaleessa wareegamanii harras wareegamaa jiranii, dhiiga ilmaan oromoo kichuu daandii gubbaarratti dhangala’ee yaadachuun barbaachisaadha. Tooftaan mootummaan wayyaanee nutti xaxxu kun kaleessas inuma jira. Garuu fayyadamummaan uummata oromoo bakka itti mirkanaa’e hin agarre. Harra uummanni keenya haasaa gowwoomsaa kana dhaga’ee warra qabsoo bilisummaa oromoof utuu lubbuu hin qusatiin diina dura dhaabbatee falmaa tureefi jiru; warra jireenya isaanii qabsoo bilisummaaf aarsaa godhee qabsaa’aa jirutti dachaanee arrabsaa, hamileesaanij buusaa, walirratti duulaa jirra. Kan itti duulamuu qabu garuu kan biraati. Tokkummaa keenyaan daran jajjabaannee galma yaadame ga’uu utuu qabnuu kutaalee xixiqqoo adda addaatti wal hiruun diina keenyaaf karaa saaqaa jirra. Qabsoon uummata keenyaa galma yaadame akka hin geenye kan taasises wal dhaga’uu utuu qabnuu yaada diinaaf gurraafi qalbii keenyadha.
As irratti wanti ka’uu qabu;
Diina ilmaan oromoo jalqabaa kan taate TPLF kaayyoonshee uummata kana bara dheeraa bituu akka ta’e namuu beeka. Kana gochuufis akka meeshaatti kan ishee gargaaru dhaaba maqaa oromoon socho’u OPDO fayyadamaa jirti. Dhaaba kana kan bixxile akka isheef ta’utti, fedhiishee akka guututti kan uume mootumaa diina orommoo wayyaaneedha. OPDOn yaadaa fi tarsiimoo mootummaa wayyaanee bakkaan ga’uuf akka hojjetaa jiran isaanuu dubbataniiru. Qabsoon uummata oromoo garuu caasaa mootummaa wayyaanee diiguudha. Harra garuu namoonni baayyeen kaayyoo qabsoo oromoo ganamaa dagachuun dhaaba kallattii qabsoo uummataa jijjiiruuf arraba qaratee afaan miyaa’ee afaaniin aantummaa uummataa faarsaa, fedhii uummataa ukkaamsaa, uummata keenya eenyummaasaaf, mirga abbaa biyyummaasaaf diina fuul dura dhugaa qabatee harka qullaa rasaasa diinaa fuuldura dhaabbatee falmaa hadhaawaa gochaa jiru ajjeesisaa jiru waliin dalga goranii kaayyoo wareegamtootaa galma malee hambisuuf yaaluun gowwummaa bara garbummaa bifa haaraan lubbuu itti horuuf dhufedha.
HORAA BULAA; DEEBANAA!
« SBO Ebla 05,2017. Oduu, Gabaasa Ibsa Gaazzexaa KHR-TUBD kennan irratti qindaa’e, Gaaffii fi deebii Qeerroo dar gaggoota Fayyisaa Asaffaa fi Anuwaar Sa’id waliin godhame kutaa lammaffaa fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa
New- Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 6,2016 »